U beddel shp ilaa kml ... iyo qiiq dhan - Geofumadas
Ku beddel shp si kml ... iyo sigaar cabbid oo dhan
Maarso, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
Fdo2Fdo waa codsi xiiso leh oo u adeegta oo keliya in loo rogo feylasha feylka qaabka illaa kml, maaddaama boostada si xun u shaacineyso. Waxay noqoneysaa hadda beddelka dhimashada kadib shp2kml in sida waafaqsan xeerarka uu abuuray, sida muuqata ay dhacdey.
Markaad aragto farsamooyinkeeda, waxa la yaab leh in la ogaado wax kasta oo ay ka fikirto inay tahay qalab bilaash ah.
Anigu waxaan si dhakhso ah uga helay Cartesia, waxaa dhisay Boqorka, iyada oo xuquuqda loo qoondeeyey sida waafaqsan About iyo sida dhabta ah waxaa loo sameeyaa si loo sameeyo is-weydaarsiga xogta FDO (Qalabka Data Data) taas oo ah qiiq ayaa soo baxay laga bilaabo AutoDesk iyo dadaalada kale ee ku dhammaaday MapGuide Open Source.
Sidaas ma aha la filayaa in this qalab fudud yahay oo kaliya diinta files, aad u bedeli karaan xogta laga dhufto ee xogta aan ollogga kala duwan sida Oracle, Server SQL, Informix iyo MapGuide files Discrete oo kala duwan sida KML iyo qaabka file.
Kala sheekeysiga qaababka shp
Interface waa mid aad u fudud, beddel kasta oo aad leedahay ikhtiyaari ah si loo bedelo faylasha dhameystiran ama faylal shakhsiyeed, user iyo password haddii ay dhacdo saldhig sida Oracle. Waxa suurtogal ah in qaabka shp loo qaabeeyo qaabab aan caadi ahayn sida:
Si la mid ah, waxaa loo bedeli karaa qaababka sdf
Laga soo bilaabo xogta Oracle iyo Informix, iyada oo qalabyada khaaska ah loo diri karo oo keliya
Waa inaad aragto !!!
Codsiga waa in la baaraa maxaa yeelay wuxuu leeyahay awood weyn, marka hore waa wax lala yaabo sababta culeyskiisu u yahay 30 MB laakiin markaad aragto inuu shaqeynayo, waxaad ogaan doontaa sababta. Xitaa waad isku habeyn kartaa feyl shema kaas oo ah xuduudaha koobiyeynta, isku-darka, beddelidda iyo dhowr waxyaalood oo kale oo u dhaxeeya maamulayaasha xogta kala duwan ayaa lagu qeexay.
Caawimadu way jaban tahay, ugu yaraan ma aanan ka heli karin faylka .chm laakiin dhib malahan. Marka lagu daro GUI waxay leedahay adeeg amarka xariijinta iyo API.
Soo qaado fdo2fdo
Post Previous" Hore Ku dhowaad 3 su'aalood oo ku saabsan Naqshadeynta Buundada
Post Next Virtual Earth wuxuu cusbooneysiiyaa 21 TB oo sawirro ahNext »
22 Jawaab ah "U beddelo shp kml… iyo qiiq dhan"
nafta isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2014 at
Meeqo ayaan ku soo dalacayaa gawaarida gawaarida?
Oscar isagu wuxuu leeyahay:
Janaayo, 2013 at
Waxaan rabaa inaan sameeyo tijaabada waa inaan badalo shp iyo hadii sidoo kale jiro sida loo soo celiyo kml iyo kmz
Vanaheim isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2012 at
Wax ku darsasho aad u wanaagsan…. hanad
fme isagu wuxuu leeyahay:
waxaa jira barnaamij la yiraahdo "shp2kml", dhagsii google
mucjisooyinka isagu wuxuu leeyahay:
boggan wax ka tari maayo ... waxaa jira qaab kale oo wax ku ool ah jum !!!
Anders isagu wuxuu leeyahay:
qalad ayay ku siisaa ... way garan karaan sida loo saxo ...
ma shaqeynayo isagu wuxuu leeyahay:
Ma shaqeynayo, waxay ku siisaa qalad.
Edwin isagu wuxuu leeyahay:
Hello, sidoo kale waxaan helayaa qalad isku mid ah markii loo beddelo a .shp in .kml, waxay ku tiraahdaa "ma awoodo inaan ku dhejiyo fidiyaha FDO".
Qof ayaa i caawin kara?
Albán isagu wuxuu leeyahay:
Waxa kale oo aan rabay in aan u rogo qaar ka mid ah .shp in .kml laakiin waxay ku tiraahdaa "ma awoodo inaan ku dhejiyo fidiyaha FDO".
Dhib ma aha in la xiro xiriirka, hadba inta ay wax ku biirinayaan bulshada.
Salaan, iyo mahadsanid taladaada.
adolfholp isagu wuxuu leeyahay:
Ugu horreyntii, waan ka raali galinayaa haddii aysan sax ahayn in la isku xiro boggaan, laakiin waxaan u maleynayaa inay muhiim u tahay asxaabta qaarkood inay sheegaan halka aan ka helay barnaamijka aan soo sheegnay.
Anigu waxaan isku dayey inaan hawsha dib u raadiyo markale oo aan halkan ka baxo cinwaanka
asxaabta Gacaliye, waxaan si toos ah u dejisey file ka forums ESRI iyo badalaa si fiican SHP si fayl KML, file waxaa lagu magacaabaa Shptokml, isaga waxaa doondoono, maxaa yeelay, ma xasuusto cinwaanka. Laakiin waxaa lagu buuxiyaa ARCGIS
Diego isagu wuxuu leeyahay:
Kaliya waxaan rabey inaan u beddelo qaar .shp oo loo beddelo .kml laakiin waxay ii sheegaysaa "awoodin inay xirato bixiyaha FDO".
Wax ku biiris aad u wanaagsan ... Waxaan isku dayi doonaa .. mahadsanid
Jerry isagu wuxuu leeyahay:
Soo degsashada, waad ku mahadsan tahay soo gelinta
Braulio Torres isagu wuxuu leeyahay:
Waan hoos u dhigi doonaa oo waxaan kuu sheegi doonaa sida ay iigu shaqeysay
khariidad isagu wuxuu leeyahay:
soo dejinaya ... Waxaan isku dayi doonaa inaan ku mahadceliyo wax ku biirinta
si fiican aan u aragno inay shaqeyneyso ... graxz
Soganep isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2009 at
Waxaan doonayaa inaan soo dejiyo si aan u xaqiijiyo.
Waad ku mahadsan tahay saamiga.
Pedro isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxay noqon doontaa mid waxtar badan….
Eduardo isagu wuxuu leeyahay:
waad mahadsan tihiin .. waan isku dayi doonaa ..
Angela laga bilaabo Chocolate Bailable isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan horey u soo dejineynaa waxaanan isku dayi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodo.